မြှားနတ်မောင် :: နှလုံးသားရေးရာ အမေးအဖြေ
Subject: အချစ်ဆိုတာဘာလဲ 11th May 2009, 4:55 pm
Subject: Re: အချစ်ဆိုတာဘာလဲ 14th May 2009, 6:19 pm
အချစ်ဆိုတာဘာလဲ ဆိုတော့ တကယ့်ကဗျာဆရာတွေ ပညာရှိကြီးတွေက အမျိုးမျိုး
မိန့်ဆိုခဲ့ကြတယ်....ဒါပေမယ့် အများက လက်ခံနိုင်တဲ့ စကားတစ်ခွန်းကိုတော့ ဘယ်သူမှ မပြောနိုင်ကြဘူး....အချစ်ဆိုတာဘာလဲ လို့ သိချင်ရင် ကိုယ်ပိုင်
နှလုံ့းသားနဲ့ ရင်းပြီးမှ သိရတာ..အဲ့ဒီအခါကြရင် သိလာလိမ့်မယ်.......
နှလုံးသားနဲ့ ရင်းရတယ်ဆိုတော့ နည်းနည်းတော့ခံနိုင်ရည်ရှိဖို့လိုတယ်.....
Subject: Re: အချစ်ဆိုတာဘာလဲ 14th May 2009, 8:28 pm
အချစ်ဆိုတာ အုံ့ပုန်းမဟုတ်ဘူး ။ လွတ်လပ်စွာ ချစ်ပိုင်ခွင့် ရှိတယ် ။
Subject: Re: အချစ်ဆိုတာဘာလဲ 19th May 2009, 6:16 pm
တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ချစ်မိပြီဆိုရင် အဆုံးအစွန်ထိ နားလည်ခွင့်တတ်ဖို့ လိုတယ်။
Subject: Re: အချစ်ဆိုတာဘာလဲ 11th February 2011, 12:14 pm
အနီးစပ်ဆုံးပြောရရင် မင်းခိုက်စိုးစန် စကားကိုယူပီးပြောရလိမ့်မယ်.....
ချစ်တယ် ဆိုတာနှလုံးသားနဲ့ မြတ်နိုးတာ.......
မြတ်နိုးတယ် ဆိုတာ အသိတရားနဲ့ ချစ်တာတဲ့......
မှတ်ပုံတင်သည့်နေ့ : 2011-03-06
တည်နေရာ : စစ်ကိုင်း
အလုပ်အကိုင်/၀ါသနာ : စာဖတ်ခြင်း၊ ကဗျာရေုးခြင်း
Subject: Re: အချစ်ဆိုတာဘာလဲ 6th March 2011, 10:07 am
အချစ်ဆိုတာကို အခု ထိ နားမလည်သေးပါဘူး...။ နာမည်ကျော် အတွေးအခေါ်ပညာရှင်တစ်ယောက်ပြောခဲ့သလိုပဲ “ပိုလေ့လာလေလေ ကျွန်တော်မသိသေးတာတွေအများကြီးပဲဆိုတာ ပိုသိလေလေ” တဲ့...။ အဲဒီလိုပဲအချစ်ဆိုနားလည်ရခက်တယ်လေ...။ အချစ်ဆိုတာဘာလဲ လို့ ပြောဖို့အတွက် ကျွန်တော်လိုအပ်ပါသေးတယ်...။
မှတ်ပုံတင်သည့်နေ့ : 2011-12-03
Subject: Re: အချစ်ဆိုတာဘာလဲ 4th December 2011, 4:52 pm
အချစ်ဆိုတာကို (ကျွန်တော့ ဦးဏှောက်သေးသေးလေးနဲ့ ချင့်ချိန်ပြီးပြောရရင်တော့) atta တစ်ခုပါ ရှင်းလင်းချက်ပေးရရင်တော့ . . . ခင်ဗျား ကောင်မလေးတစ်ယောက်ကို ချစ်ကြည့်လိုက်ပါ အဲဒီကောင်မလေးကို မမြင်ရရင် ခင်ဗျား စိတ်မချမ်းသာဘူး သူ့ကို မြင်နေရရင် စိတ်ချမ်းသာနေမယ် . . . စိတ် ပျော်ရွှင်မှုက ခင်ဗျားပဲရတာလေ . . Atta ဆိုတာလည်း (ကျွန်တော်သိသလောက်တော့) အဲဒါကိုပဲ ပြောတာ . . .
Subject: Re: အချစ်ဆိုတာဘာလဲ